मेस्सी-रोनाल्डोलाई पन्छाउँदै सर्वोत्कृष्ट बनेका लेवान्डोस्कीको यस्तो छ संघर्ष कथा - Kohalpur Trends
३ पुस, काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण २०२० को बालोन डे ओर अवार्ड रद्द भएपछि रोबर्ट लेवान्डोस्कीले आफ्नो निराशा लुकाउन सकेनन् । तर अन्ततः फिफा अवार्डमा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी छानिएपछि उनको खुशी फर्केको छ ।
लिओनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोसहित अन्तिम तीनको मनोनयनमा परेका लेवान्डोस्की शीर्ष स्थान हासिल गर्नेमा स्पष्ट जस्तै थिए । किन उनी नहुने ? उनको दावेदारी बाध्यकारीजस्तै थियो ।
गत सिजनमा उनले ४७ खेलमा ५५ गोल गरे । तीन प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ता रहे, बुण्डेसलिगा, जर्मन कप र च्याम्पियन्स लिगमा । च्याम्पियन्स लिगमा लिओनल मेस्सी (११८) र क्रिस्टियानो रोनाल्डो (१३४) ले मात्र लेवान्डोस्की (७१) भन्दा धेरै गोल गरेका छन् ।
बायर्नले युइएफए सुपर कप र जर्मन सुपर कप पनि जित्यो । र, यी सबै जितको मुटुमा यी स्ट्राइकर थिए । अहिले कसैले पनि उनको क्षमतामा शंका गर्दैनन्, तर विगतमा उनले आफू यो स्थानमा पुग्ने सोचेकै थिएनन् । किशोरावस्थामा र्फकँदा उनी व्यवसायिक खेलाडी नबन्ने उच्च सम्भावना थियो ।
लेवान्डोस्की १७ वर्षको छँदा सन् २००५ मा उनका पिता किगिस्टोफको निधन भयो, जो जुडोका जुनियर युरोपियन च्याम्पियन थिए । त्यसबेला रोवर्ट सानो फोर्थ डिभिजन क्लब डेल्टा बार्साबाट पोल्याण्डकै उत्कृष्ट टिम लेगी पुगेका थिए, जसले १४ लिग उपाधि जितेको छ । यो उनको करियरको एक महत्वपूर्ण खुड्किला मानिएको थियो र लेवान्डोस्की विस्तारै लेगिको रिजर्भमा नियमित बन्न थालेका थिए । तर घुँडाको चोटले उनको प्रगति रोकिदियो ।
जब उनी केही हप्ताको लागि बाहिरिए, लेगिले आफ्नो निर्णय गर्‍यो । लेवान्डोस्की उनीहरुको भावि योजनामा थिएनन् । त्यो समय लेगीले सोच्यो, उनीहरुसँग लेवान्डोस्की भन्दा राम्रो स्ट्राइकर । उनलाई क्लव नै छाड्न भनियो ।
यो थाहा पाएपछि, उनकी आमा इवोनाले उनलाई घरमा लगिन् । खाना बनाइदिइन् । तर व्यवसायिक सपना चकनाचूर भएर उदासिन लेवान्डोस्की खाना खान चाहँदैनथे ।
भाग्यवस, उनलाई तेस्रो डिभिजन टीम जिन्ज प्रुस्कोबाट कल आयो । सो क्लब सँधै थोरै पैसामा खेलाडीहरू किन्ने, तिनीहरूलाई सुधार गर्ने र उनीहरूलाई बेच्ने कुरामा अभ्यस्त थियो । जिन्जका पूर्वअध्यक्ष मारेक स्लिविन्स्कीले लेवान्डोस्की उनीहरूको ‘सुनको माछा’ हुन् भनेका थिए । लेगिबाट उनलाई किन्नको लागि तिनीहरूले केवल १,००० डलर तिरे ।
सुरुमा, उनी जिन्जका ठूलो स्टार थिएनन् । उनले प्रति महिना लगभग २३० पाउण्ड कमाउँथे भने त्यहाँ अरु उनले भन्दा तीन गुणा बढी कमाउँथे । यद्यपि उनले छिट्टै आफूलाई स्थापित गरे । उनले एउटा घर भेट्टाएका थिए ।
आफ्नो पहिलो सिजनमा उनले १५ गोल गर्दै पु्रस्कोलाई बढुवा गराउन मद्दत गरे । दोस्रो डिभिजनमा पनि उनले गोल गरिरहे । डिसेम्बर २००७ मा जासेक ग्रेमबोकी प्रशिक्षक बने ।
‘पुस्को एउटा राम्रो टोली थियो र त्यस टिमका ५ खेलाडीले पोल्याण्डको टप टिम एकस्ट्राक्लसामा स्थान बनाए,’ ग्रेमबोकीले बीबीसीसँग भने, ‘तर लेवान्डोस्की एक विशिष्ट प्रतिभा थिए, जोसँग सबैथोक थियो । उनी कडा मेहनति, प्राविधिक र छरिता थिए ।’
घुँडाको चोटपछि सम्भवत उनले लेगीमा कुनै सम्भावना छैन भन्ने महसुस गरे । त्यसैले उनले कडा मेहनत गरे । र, प्रुस्कोले आफ्नो सुपरस्टार पायो ।
दुई महिनापछि, ग्रेमबोकी उनको क्षमतामा विश्वस्त भए । प्रुस्कोले एकेस्ट्रक्लस टिम एलकेएस लोड्जसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो । लेवान्डोस्कीलाई अनुभवी क्रोएशियाली डिफेन्डर इभान उडारेभिकको विरूद्ध राखिएको थियो । उनी पिचका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी थिए ।
‘मैले पोल्याण्डका लागि सात खेल खेलेँ, त्यसैले मैले सोचे कि उसलाई राष्ट्रिय टिममा प्रवेश गर्न कुनै समस्या हुने छैन । तर निश्चय पनि बायर्न ? ओह, त्यो गाह्रो हुनेछ । अब, लेवान्डोस्की युरोपका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी हुन् । उनले मलाई धेरै आनन्द दिए,’ ग्रेमबोकी भन्छन् ।
‘लेगीले ठूलो गल्ती गर्‍यो । उनीहरूले रोबर्टलाई राम्रो मान्छे भने तर उनीभन्दा अरु राम्रो स्ट्राइकर भएको सोचे । मैले लेवेन्डोस्कीलाई दुई महिना प्रशिक्षण दिएँ र उनी राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी बन्न सक्छन् भन्ने देखेँ । लेगीका कसैले पनि यस्तो देखेनन् ।’
ग्रेम्बोकीको मातहतमा लेवान्डोस्कीले २१ गोल गरे । जसले गर्दा प्रुस्को टप डिभिजनको आश्चर्यजनक दाबेदार बन्यो । थोरै अन्तरले उनीहरु बढुवा हुन सकेनन् । शीर्ष क्लबमा खेल्नका लागि लवान्डोस्कीसँग सबै कुरा थियो ।
सन् २००८ मा लेगीले दोस्रो मौका पायो । उनीहरुले लेवान्डोस्कीलाई फेरि गुमाए । उनीहरु स्ट्राइकर पोजिसनलाई बलियो बनाउन चाहन्थे तर लेवान्डोस्कीभन्दा सिडी टेनेरिफबाट मिकेल अरुबारेनालाई रोजे । जबकी अरुबारेनाले लेगिका लागि कहिल्यै गोल गरेनन् । लेवान्डोस्की लेच पोजनानमा स्टार बने । पोजनान लेगीको प्रतिस्पर्धी थियो । लेचले लेवान्डोस्कीका लागि पु्रस्कोलाई करिब ३ लाख पाउण्ड खर्चेको थियो ।
त्यतिबेला लेचका कप्तान रहेका बार्तोस बोसाकी भन्छन्, ‘म लेवान्डोस्कीको पहिलो ट्रेनिङ सेसन सम्झन्छु । सबै खेलाडीले उनी राम्रो भएको माने । ट्रेनिङ गेममा उनले कोलम्बियन डिफेण्डर मानुएल बर्बोलेडाविरुद्ध खेले, जो इक्स्ट्राक्लाका बलिया खेलाडी थिए । यद्यपि रोबर्ट डराएनन् ।’
‘रोबर्ट एथ्लेटिक म्यान हुन् । उनी पहिला पातला थिए । त्यसैले धेरै व्यक्तिले उनलाई एक्स्ट्रक्लासमा शारीरिक समस्या हुन सक्छ भन्ने सोचे । त्यो प्रशिक्षण सेसनपछि हामीलाई थाहा थियो कि उनी राम्रो हुन्छन् ।’
लेवान्डोस्कीका लागि नम्बर ९ पोजिसनमा पेरुभियन स्ट्राइकर हर्नान रेनगिफोसँग कडा प्रतिस्पर्धा थियो ।
‘प्रशिक्षक फ्रान्सिसेक स्मुडाले रोबर्टलाई खेलाउँदा देब्रे वा दायाँ मिडफिल्डरको रूपमा छनौट गर्थे । तर केही महिनापछि अर्का प्रशिक्षक ज्यासेक जिलिन्स्कीले उनलाई सेन्टर फरवार्डको रूपमा खेलाउन शुरू गरे र रोबर्ट निकै प्रभावशाली भए,’ बोसाकी भन्छन् ।
२००९-१० को सिजनमा लेवान्डोस्कीले १८ गोल गर्दै लेचलाई लिगको उपाधि दिलाउन मद्दत गरे ।
‘जब उनी पहिलोपटक ड्रेसिङ रुममा आए, उनी शान्त थिए । तर मैदानमा अत्यन्त आत्मविश्वासी । उनलाई आफ्नो लक्ष्य थाहा थियो,’ बोसाकीले थपे ।
२००९-१० को पोलिस शीर्ष लिगमा उनी सर्वाधिक गोलकर्ता बने । पोल्याण्डमा प्रशिक्षक लिओ बिनहाकरले उनलाई राष्ट्रिय टिममा बोलाए र सान मारिनोविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यु गराए । सायद अवश्यम्भावीरुपमा, उनले गोल गरे । बोसाकीले पोल्याण्डको एउटा प्रशिक्षण सेसन सम्झना गरे ।
‘मैले रोबर्टको विरूद्ध खेलेँ । त्यसमा उनलाई रोक्न ठूलो समस्या थियो । प्रशिक्षणपछि मैले बीनहृयाकरसँग कुरा गरेँ । उसले मलाई भन्यो, ‘उ निकै राम्रो छ’ । मैले जवाफ दिएँ, ‘म खुशी छु उसँग एकै टोलीमा खेल्दा ।’
पोजनानमा दुई वर्ष बिताएपछि उनी विदेशी लिगमा जाने चाहन्थे । त्यतिबेला ब्ल्याकबर्न रोभर्स उनका लागि इच्छुक थियो । यद्यपि इजेन्डजल्लालाजोकुल्ल नामक आइसल्याण्डिक ज्वालामुखीका कारण युरोपको वैदेशिक फ्लाइटहरु रोकियो र लेवान्डोस्की इंग्ल्याण्ड गएनन् । अन्त्यमा, बोरुसिया डर्टमण्डले उनलाई ४.५ मिलियन पाउण्ड कममा किन्यो ।
लेवान्डोस्कीले चार वर्ष डर्टमण्डमा खेल्दा १०३ गोल गरे । डर्टमण्डमा उनले लेचको जस्तै समान समस्या बेहोरे । पाराग्वियन स्ट्राइकर लुकास बारिओस स्ट्राइकिङ पोजिसनमा प्रशिक्षक योर्गन क्लोपको पहिलो च्वाइस थिए । यसले गर्दा लेवान्डोस्कीले आफ्नो पोजसिनभन्दा बाहिर खेल्नुपथ्र्यो । क्लोपले उनलाई अट्याकको सेन्टरमा सिफ्ट गरेपछि लेवान्डोस्की टिमको स्टार बने ।
‘डर्टमण्डमा सबै कुरा परिवर्तन भयो । उनको लागि त्यो महत्वपूर्ण मुभ थियो,’ बोसाकीले भने ।
त्यसपछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेरेनन् । सन् २०१२-१३ को च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलमा उनले रियल मड्रिडविरुद्ध ४ गोल गरे । एक वर्षपछि उनी बायर्नमा पुगे । जहाँ उनले धेरै उपलब्धि हात पारे । जसमध्ये सन् २०१५ को बुण्डेसलिगामा वल्फ्सवर्गविरुद्ध उनले ९ मिनेटमा ५ गोल गरे ।
‘उनले परिवार र श्रीमतीबाट ठुलो साथ पाएका छन् । लेवान्डोस्की जस्ता खेलाडीले एउटै विषयमा मात्र सोच्न सक्छन्, सफलता, सफलता र सफलता । अहिले उनी पोल्याण्डको लागि मात्र खेल्दैनन् बायर्नका लागि पनि खेल्छन् । र उनी मेसी र रोनाल्डो जस्तै लिजेण्ड बनेका छन्,’ ग्रेम्बोकीले थपे ।
लेवान्डोस्कीले राष्ट्रिय टिमका लागि ११६ खेल खेल्दै ६३ गोल गरेका छन् ।
‘उनी पोलिस फुटबलको इतिहासमै उत्कृष्ट खेलाडी हुन्,’ ग्रेम्बोकीले भने,’ ‘फुटबलका उत्कृष्टहरुको सुचीमा उनले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् ।’
Previous Previous post: कांग्रेसभित्र उठ्यो छाँया सरकार हेरफेरको माग
Next Next post: बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता